Imba | Yangu Mota Kunze | Tumira Mota kuUK
Tumira uye Nyoresa mota yako kuUK
Yangu Mota Inotakura inogona kutumira, kugadzirisa, kuyedza uye kunyoresa mota kubva chero kupi pasirese kuenda kuUK.
Pasi rese network yevanotakura
Yakakura mumiriri network, inovhara zvemukati mekutakura, nzira dzekunze uye kuendesa midziyo kuUK.
Chete zvakavanzika IVA bvunzo nzira
Unyanzvi hwakasarudzika hwekushandura zvakachengeteka, kuyedza, uye kunyoresa - chete kunzvimbo yedu.
Kurumidza track DVLA kunyoreswa
Vakazvitsaurira veDVLA vanofambidzana kuti vaone kunyoresa kwakanaka uye kwakatsetseka.
Ndedzipi mota dzemotokari dzatinotora kunze?
Mazana evatengi pamwedzi vanosarudza isu kuti titore zvinhu zvese kubva kune supercars kusvika kune superminis.
Kana uine mota kwemwedzi mitanhatu uye ukagara kunze kweEU kwemwedzi gumi nemaviri, unogona kuendesa yako yemutero yemahara. Isu tinoita izvi tichishandisa Kutamisirwa kwesheni yekugara.
Isu tinobata tsika yekujekesa tsika panzvimbo yako, uye ita shuwa kuti yakarurama neHMRC. Izvi zvinoita kuti huwandu chaihwo hweVAT uye mutero ubhadharwe.
Isu tinobata neHMRC yeako EU NOVA yekupinda uye unova nechokwadi chekuti kunyoreswa kwako kuUK kunoitwa nemutengo unoshanda uye nenguva inonzwisisika.
Tichafara kutora zvaunotora kana mota yako yatove muUK. Kugadzirisa mota yako, kuyedzwa uye kunyoreswa nekukurumidza sezvazvinogona.
Kana tangotumirwa uye tsika dzabviswa tinoronga zvifambiso zveinishuwarenzi kuenda kunzvimbo yedu kugadzirisa, kuyedza, uye kunyoresa mota yako kumigwagwa yeUK.
Yakazara yekupedzisira-kusvika-kumagumo mota yekumisikidza sevhisi!
Ko vatengi vedu vanoti chii?
- Trever Kudonha (Landrover Series 1)
Bata nhasi nhasi nezvekota yakanangana nekutenga kwako. Yedu bespoke makotesheni akaverengerwa uye anosanganisira ese mashandiro - kumisa chero njodzi yemari yakavanzwa!
Imba uye Nyoresa Mota Yako MuUK TINOSHANDA NEZVIMOTO ZVINOBVA MUNYIKA DZOSE
ZVikonzero zvekusarudza mota yangu kuendesa kunze.
EU & Isiri-EU mota inopinza nyanzvi
Pasi rese network yekutakura zvinhu
Iyo yega yega yakavanzika yeIVA yekuyedza nzira yemotokari dzevanofamba muUK
Iri timu rine ruzivo rwekunze, kuyedza uye kunyoresa nyanzvi
Inokurumidza kutendeuka nguva pasuo nesuo chero yakasimba muUK
Kurumidza track kunyoresa kweDVLA
Yakakura mumiririri uye mudiwa network pasirese
Mune dzimba mwenje kutendeuka uye kutevedzera kuyedza kuyedza
Yangu Mota Kunze kwave kuunza mota kuUK kubva kumatunhu epasirese apfuura makore makumi maviri nemashanu. Isu tinopa vatengi vanoshuvira kupinza mota muUK imwe nzira iri nyore yekutora nzira yacho vega. Isu takavaka bhizinesi redu pahunyanzvi hwepaimba neimba sevhisi inovhara zvese zvinotakurwa nemotokari yako uye kumisa matambudziko angangoitika kana usina timu yedu kuti ikubatsire. Tine ruzivo rwakazara uye rwakadzama runodiwa kuti sarudzo yekupinza mota kuUK ive nyore - isu tiri pano kuzopa mhinduro yekuunza mota yako kuUK.
Kana iwe uri kutamira kuUK, watenga mota yechero zera kubva kunze kwenyika kana kuunza yako European mota munyika, isu tiri pano kuzobatsira.
Shandisa Yangu Mota Kunze kwekutakura mota yako uye uchave nechokwadi patinoshandisa bhizinesi redu repasirese kubhizimusi rebhizinesi, ruzivo rwemaindasitiri uye akasiyana akasarudzika mashandiro eIVA ekuyedza zvivakwa kukurumidza uye kudhura zvinobudirira kudzosera iwe nemotokari yako munzira muno muUK .
Chii chinotaurwa nevatengi vedu nezve chiitiko chekuunza mota dzavo kuUnited Kingdom neMy Car Import?
4.5 pavashanu nyeredzi chiyero paTrustpilot
Maererano ne 6,470 wongororo
Zadza fomu rekukumbira kwequot for bespoke mota import quation.